Telegram dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao lehibe: hafatra an-tsary, fandoavam-bola ary valisoa | Vaovao momba ny gadget
Telegram dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao manan-danja: hafatra an-tsary, fandoavam-bola ary valisoa
Ary tsy sasatra mamerina izahay fa ny fampiharana Telegram dia mialoha hatrany ny fanavaozana sy ny fanatsarana ampiharina. Amin'ity tranga ity, ny kinova vaovao an'ny fampiharana natomboka ora vitsy lasa izay dia manampy vaovao mahaliana vitsivitsy hankalazana Telegram version 4.0 samy amin'ny fitaovana Android sy iOS. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nohavaozina ny fangatahana PC sy Mac fa tsy miahiahy izahay fa ho afaka hanao izany afaka ora na andro vitsivitsy.
Ny vaovao tena manandanja dia tonga amin'ny endrika fanatsarana ary afaka mahita vaovao manan-danja vitsivitsy isika. Ny voalohany asongadinay dia ny hafatra an-tsary. Amin'ity safidy vaovao ity dia ho afaka manao rakipeo ny mpampiasa ary mizara izany amin'ireo mpampiasa hafa amin'ny fomba haingana sy tsotra ary mahomby. Ho fanampin'izany, aseho amin'ny boribory ireo horonan-tsary ireo mba tsy hampifangaro azy ireo amin'ireo horonan-tsary nalefa. Raha hampiasa azy io dia manindry ny kisary mikrô izahay handeha amin'ny maody fakan-tsary ary mitazona hafatra an-tsary foana. Afaka swipe up isika mandritra ny firaketana ny hafatra ary hampiasa maody tsy misy tanana isika.
Afaka manao toy izany koa isika fa amin'ny feo, izany hoe, hafatra am-peo. Mikasika ny kisary mikrô izahay ary mirakitra izay tadiavinay, rehefa avoakanay dia alefa ary raha mihetsika ambony isika dia hampiasa ilay maody maimaim-poana. Etsy ankilany, tsy maintsy hazavaina amin'ny lafiny roa fa azontsika atao ny mamafa izay voarakitra (na ny horonan-tsary na ny feo) amin'ny alàlan'ny fivezivezena miankavia.
Etsy ankilany manana isika ny safidy Telescopios.pe. Ity dia karazana "snapchat" izay ahafahan'ny tsirairay mijery hafatra video avy amin'ny fantsom-bahoaka. Tsy mila kaonty Telegram izany ary afaka mahita ny mombamomba antsika rehetra amin'ny telegram.org izahay
Ho fanampin'ireny fanatsarana ireny dia manaiky ny fandoavam-bola avy amin'ny mpampiasa sy ny raha misy iPhone, ny fandoavam-bola amin'ny bot dia manohana an'i Apple Pay. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo fiasa vaovao tsara indrindra nampiharina tamin'ity fanavaozana ity fa misy bebe kokoa.
Ampahibemaso izao ny sehatra fijerena haingana ary tsy ho ela dia hanohana tranokala an'arivony izy ity, izay ahafahantsika manampy ny tiana na hamorona fomba fijery haingana momba ny lahatsoratra miaraka amin'ny mpanonta. Ary farany ny fifaninanana hahazoana $ 200.000 nambara tamin'ny kinova vaovao. Raha te handray anjara dia ilaina ny mahafantatra ny fomba fandaharana amin'ny HTML hamoronana karazana modely ary ilay olona mamorona modely tsara indrindra no ho mpandresy amin'ity vola ity.
Raha mpampiasa Telegram ianao dia efa mila manana ny fanavaozana vonona hapetraka ary raha tsy manana dia, inona no andrasanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Telegram dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao manan-danja: hafatra an-tsary, fandoavam-bola ary valisoa
Android Pay dia ho hita any Espana amin'ity taona ity